Momba anay - Shijiazhuang Jipeng Import sy Export Co., Ltd.
Fanohanana mailaka plumbingsales01@sjzmetal-electric.com
Antso fanohanana 0086-13833199589
EN877 Grey Pipaina Maitso
Couplings vy baoritra sy voahangy
EN545 598 Pipa-drindrina & Fangongo-pandehanana
Fonosam-bary sy famonosam-basy, Gully
Singa vita amin'ny vy vy
Shijiazhuang Jipeng Import sy Export Co., Ltd.
"Izahay manokana dia fantsom-pirazanana! Isika dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaparitahana!"
Vondronà entana manafatra sy manondrana izay nankatoavin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny varotra PRChina, ary natsangana tamin'ny taona 1998. Ny orinasantsika dia manam-pahaizana manokana amin'ny vokatra metaly sy mineraly, milina, vokatra indostrialy ary vokatra elektrika. Ny vokatra tena mahasoa sy za-draharaha dia ny fantsona sy ny kojakoja, ny singa fanariana vy. Amin'ity sehatry ny fandraharahana ity dia efa nanatri-maso sy nandray anjara tamin'ny tantarany sy fampandrosoana isika hatramin'ny voalohany. Hatramin'izao 20 taona mahery izao no efa niarahanay teto amin'ity sehatra ity.
1. Ny rafi-pitondrana fantsom-tany vita amin'ny vy tsy misy najorony, ny fantsona ary ny kofehy vy tsy misy vy hanamboarana ny fanariam-pako, ny fako sy ny fitsofohana araka ny EN877, DIN19522, ASTM A888, CISPI301, CASB70, ISO6594.
2. Socket sy spigot ny rafitry ny fantsom-tany vita amin'ny vy arakaraka araka ny BS4622, BS437, BS416, ASTM A74.
3. Fantsona vy vita amin'ny fantsom-bary amin'ny fantsom-pifandraisana ISO2531, EN545, EN598.
4. Manarona sy hametahana amin'ny EN124, SS30: 1981, manintona, gorodona ary tondraka ny tafo.
5. Fanaterana sy fanadinoana isan-karazany ary ampaham-pamokarana araka ny mpanjifan'ny vahiny na santionany. Ny fitaovana dia mety ho ductile, karbonina vy ary vy vy.
Ny vokatra avy any aminay dia manana laza tsara hatrany amin'ny tsena avy any ivelany ary amena any Etazonia, Canada, firenena eoropeana, firenena any Azia Atsimoatsinanana, Russia, HK ary Taiwan sns, manome toky izahay fa hanome vokatra avo lenta, amin'ny fanaterana fotoana sy ny serivisy. Ny mpanjifa rehetra ao an-trano sy any ivelany dia mandray ny orinasa sy ny trano fiasanay.
1. Niorina tamin'ny 1998, ny orinasantsika dia manana tantara lava, izay ny vola miasa dia mihoatra ny 20 tapitrisa dolara amerikana. Nanana entana feno za-draharaha izahay mba hanompoana ny mpanjifa vahiny, mpitantana ny tetikasa manokana hiady amin'ny antsipirihany momba ny vokatra, handamina ireo antontan-taratasy sy olana momba ny fandefasana sns .. Afaka mamokatra tsy vokatra vita fotsiny ihany isika, fa ho OEM ihany koa, mba hanao vokatra isan-karazany na fizarana faritra araka ny mpanjifan'ny raharaham-bahiny. sary na santionany.
2. Ny mpanjifa dia afaka mankafy entana mora kokoa sy mahomby eto, ny tombotsoantsika dia ny fanangonana entana isan-karazany ho ao anaty boaty feno iray, ny mpanjifa sasany aza dia mila entana mihoatra ny 5 amin'ny fotoana iray ao anaty boaty iray. Ho mora kokoa amin'ny mpanjifantsika kokoa izany.
3. Ny fifehezana kalitao dia serivisy sarobidy iray ho an'ny mpanjifantsika. Mandritra ny famokarana na alohan'ny fandefasana, ny mpandrindra ny kalitao dia ho any amin'ny orinasa hanafaingana ny fandefasana sy ny fizahana ny kalitao sy ny tatitra an-tsoratra. Ny lahatsoratra tsy lavorary dia holavina mandra-pahatongan'ny mpanamboatra manavao na hanatsara ny kalitao tsara.
Fantson-dàlana SML, fitaovana ary serivisy fanakodia ...
Cast iron no fitaovana maoderina ho an'ny dom ...
Getsetsaly manokana: Inona avy ary izy ireo ...
Mahay ny tontolo iainana ve ianao?
Mampiavaka ny fantsona vy